01/11/2015 – Gentleman Magazine
ဒုတိယအချစ်က အချစ်ဦးထက် ပိုကောင်းရသည့် အကြောင်းရင်း (၁၀)
ချစ်ဦးသူနဲ့ ကွေကွင်းရပြီး နောက်ထပ်အချစ်သစ်နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာ ပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ်ရော မှန်ကန်ရဲ့လား? အကြောင်းရင်းကတော့ ပထမအချစ်မှာ ထိခိုက်နာကျင်စရာတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ ဒါမှမဟုတ် အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စာပိုတတ်သွားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒုတိယအချစ်က အချစ်ဦးထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၁၀)ခု ကို ဖော်ပြလိုပါတယ်။ ၁။
တိတ်ဆိတ်တဲ့ ထမင်းဝိုင်းတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ နည်းလမ်း ၆ ခု
အိမ်မှာ အေးအေးဆေးဆေး ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် နှစ်ယောက်တူတူ ညစာစားရတာ ရိုမန်တစ် ဆန်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ရိုမန်တစ်မဆန်ရင်တောင် သင့်ချစ်သူနဲ့ တူတူရှိနေရလို့ စိတ်ကျေနပ်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အေးဆေးခြင်းဟာ တိတ်ဆိတ်ခြင်းအဖြစ် ပြောင်းသွားခဲ့ရင်ရော?? တကယ်လို့ ညစာစားပွဲမှာ တိတ်ဆိတ်နေတာဟာ ဒေါသ၊ ရန်ဖြစ်မှုကနေ စလာတာဆိုရင်တော့ အဲဒါတွေက Pro တွေနဲ့
စုံတွဲတွေအကြားရှိသင့်တဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့် (၉)ခု
ချစ်သူစုံတွဲတွေ၊ ဇနီးမောင်နှံတွေ အကြားမှာ ငွေရေးကြေးရေး ပြဿနာတွေ မဖြစ်စေဖို့ ပျော်ရွှင်စွာ လက်တွဲကြတဲ့ စုံတွဲတွေရဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်တွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ငွေကြေးအကြောင်းပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ စုံတွဲတော်တော်များများဟာ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေထက် နှစ်ကိုယ်တူချစ်စကားတွေကိုပဲ ပိုပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီလို ငွေကြေးအသုံးစရိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အစီအစဉ်တွေမရှိတဲ့အခါမှာ ငွေအကုန်အကျများတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေပြတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် စကားများစရာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့စုံတွဲတွေကတော့
ချစ်သူလင်မယားဆက်ဆံရေးနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကြားက ဆက်စပ်မှု
ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ပြီး အောင်မြင်ချမ်းသာလာတဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး အယောက်(၅၀၀)ကို နှစ်(၂၀)ကြာအောင် လေ့လာခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အချစ်၊ စိတ်ကူးယဉ်မှုနဲ့ လိင်ကိစ္စတွေက တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုချင်တပ်မက်မှုဟာ လူသားတွေရဲ့လိုချင်တပ်မက်မှုတွေထဲမှာ စွမ်းအားအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်၊ စိတ်ကူးယဉ်မှုနဲ့ လိင်ကိစ္စတွေဟာ အမျိုးသားတွေကို အောင်မြင်မှုအထွဋ်အထိပ်ရောက်အောင်
သင့်ကောင်မလေးနဲ့ ပထမတစ်ကြိမ်ချိန်းတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ နောက်တစ်ကြိမ်ကျရင် ဘယ်လို ချိန်းတွေ့မယ်၊ ဘာတွေလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာတွေ တွေးပြီး စိတ်ရှုပ်နေပါသလား။ ဒုတိယအကြိမ်ချိန်းတွေ့တာကလည်း နှစ်ဦးသားအချစ်ရေရှည်ခိုင်မြဲဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ ချိန်းတွေ့မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် ချိန်းတွေ့တဲ့အခါမှာ ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးကောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ စက်ဘီးလျှောက်စီးပါ စက်ဘီးစီးဝတ်စုံဝတ်ပြီး အမြန်ပြိုင်နင်းဖို့ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကောင်မလေးကို သက်တောင့်သက်သာနဲ့
ချစ်သူစုံတွဲဆက်ဆံရေးမှာ သင့်ရဲ့သီးခြားဖြစ်တည်မှုကို ပျောက်မသွားဖို့
ကျွန်တော်တို့အားလုံးကာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကွဲပြားခြားနားကြပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ မတူညီတဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ၊ ၀ါသနာတွေ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေနဲ့ အလေ့အကျင့်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကပဲ ကျွန်တော်တို့ကို တခြားသူတွေနဲ့ ကွဲပြားသွားစေပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သီးခြားဖြစ်တည်မှုတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြိုက်မိပြီဆိုရင် သူမစိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သီးခြားဖြစ်တည်မှုကို စွန့်လွှတ်ပြီး
ချစ်သူတွေအကြား ဆက်ဆံရေးဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပြောင်းလဲလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲလာတတ်တာဟာ နှစ်ဦးသားအရင်ကလုပ်ဆောင်လေ့ရှိခဲ့တာတွေကို ဆက်မလုပ်တော့တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ချစ်သူစုံတွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဇနီးမောင်နှံတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စရာဆက်ဆံရေးတစ်ခု ရေရှည်တည်ဆောက်နိုင်စေဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ နှစ်ဦးစလုံး ပျော်ရွှင်ရတဲ့ အရာတွေလုပ်ပါ။ သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးမှာ မတူညီတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ ၀ါသနာတွေရှိမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
ချစ်သူချင်း ဆက်ဆံရေး ခိုင်မြဲစေဖို့ နည်းလမ်း (၁၀)
ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဇနီးမောင်နှံတွေကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာ ခိုင်မြဲပျော်ရွှင်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို ခိုင်မြဲနေမှသာ တသက်တာလုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ လက်တွဲပျော်ရွှင်နေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ချစ်သူချင်းဆက်ဆံရေး ခိုင်မြဲစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်း (၁၀)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁) တစ်ဦးအကြောင်းကို တစ်ဦးသိရှိနားလည်ထားပါ။ လူတွေဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံတွေက အမြင်တွေကို ပြောင်းလဲစေပြီး
ချစ်သူကို လက်မလွှတ်ရဖို့ ကြိုးစားနေရသည့် လက္ခဏာ(၁၀)ခု
ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ သက်ဆုံးတိုင်လက်တွဲသွားချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖက်ဖက်က အချစ်တွေ ပျောက်ဆုံးပြီး ခံစားချက်မဲ့သွားတာမျိုး ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့တွေက ကိုယ့်ပါတနာကို နားလည်နိုင်ဖို့နဲ့ လက်တွဲမပြုတ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်အချစ်ကို မလိုလားတော့တဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဆက်ချစ်နေနိုင်ဖို့ တမင်အားထုတ်ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေကြုံတွေ့နေရတဲ့ လက္ခဏာ(၁၀)ခုရှိပါတယ်။
ချစ်သူ စိတ်ပျက်မသွားစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
ချစ်သူစုံတွဲတွေအကြားမှာ ပြဿနာဖြစ်နိုင်စရာတွေကို ချရေးမယ်ဆိုရင် အဆုံးမရှိစာရင်းတစ်ခု ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ ပြဿနာကြီးကြီးမားမားမဖြစ်အောင် ရှောင်လွှဲနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ သူမရဲ့ အရင်ရည်းစားဆီကနေ ပညာယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်လုပ်ရမှာက သေချာနားထောင်မှတ်သားထားဖို့ပါပဲ။ သင့်ချစ်သူက သူမရဲ့အရင်ရည်းစားနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ စိတ်ပျက်စရာ အကြောင်းအရာတွေပြောလာပြီဆိုရင် နားတွေစွင့်ထားသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ အရင်ရည်းစားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေးတွေ
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သင့်ချစ်သူမိန်းကလေးကို ချစ်တယ်ဆိုချည်းပဲ ပြောနေရတာ ရိုးလာပြီလား။ သင့်ချစ်ကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားထက်ပိုပြီး အံ့အားသင့်ကေိနပ်စေမယ့် စကားတွေ ပြောကြည့်ရအောင်ပါ။ ၁။ မင်း လှနေပါလား။ သင့်ချစ်သူရဲ့ အလှကို သင်သတိထားမိပေမယ့် များသောအားဖြင့်ထုတ်ဖော် ပြောလေ့မရှိတတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူမကိုကြည့်ရတာ လှနေတဲ့အကြောင်း ပြောပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောပေးခြင်းကြောင့် သူမက